TAARIIKHDA STURE BERGWALL OO LOO YAQAAN THOMAS QUICK - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Yvonne Åsell /Scanpix
TAARIIKHDA STURE BERGWALL OO LOO YAQAAN THOMAS QUICK
La daabacay onsdag 31 juli 2013 kl 17.14
Sannadkii 1969 ayuu Sture Bergwall oo 19 sano jir ah ka shaqeynayey isbitaalka weyn ee Falu halkaas oo uu ku faraxumeeyey afar wiil qaybta carruurta la soo jiifiyey. Wiilashaa mid ka mid ah oo uu kufsaday ayaa la miyirbeelay ceejin uu geystey.
Sannadkii 1970 waxaa Bergwall lagu xukumay in xabsi ahaan loogu hayo isbitaalka dadka dhimirka wax uga dhiman yihiin. Sida laga soo xigtay qoraalkii caafimaad ee uu isbitaalku ka qoray waxaa xaaladdiisa lagu qiimeeyey in ay tahay mid khatar ku dadka kale noloshooda.
Sannadkii 1974 ayuu tijaabo ahaan dibedda ku jooga birdaawe madaxa uga dhuftay qof ay dhowaan isbarteen. Kadibna toban goor ayuu middi geliyey qofkii. Laakiin maadaama uu Bergwall weli ku qornaa daryeel caafimaad oo khasab ah, looma soo taagin maxkamad isku day dil.
16 sano kadib Sannadkii 1990 ayey Bargwall iyo nin ay saaxiib ahaayeen qabsadeen qoys ay dhac u geysteen. Intii maxkamaddu socotay ayuu qoyskii ku markhaanti furay in uu Bergwall ugu hanjabay in uu qudha ka goynayo iyo in uu middi dhexgeliyey sariir uu ilmo yari ku hurday. Dhacdaas kadib waxaa Bergwall lagu xukumay in lagu hayo isbitaalka maskaxda, iyadoo si gaar loo eegi doono haddii ay suurtagal tahay in laga siidaayo.
Sida uu sheegay qof ay qaraabo yihiin, sannad kadib ayaa lagu dhawaaqay in uu Bergwall caafimaad kaamil ah qabo. Waana markaas markii ugu horreysey ee uu sheegto in uu qof qudha ka jaray.
XAQIIQADA XUKUMADA LAGU RIDAY THOMAS QUICK:
Yenon Levi, 24 sano, meydkiisa ayaa la helay 1988. Quick ayaa loo xukumay 1997, laakiin waa laga siidaayey sannadkii 2010.
Therese Johannesen, 9 sano, waxaa la waayey 1988. Quick ayaa loo xukumay 1998, laakiin waa laga siidaayey sannadkii 2011.
Johan Asplund, 11 sano, waxaa la waayey 1980. Quick ayaa loo xukumay 2001, laakiin waa laga siidaayey sannadkii 2012.
Trine Jensen, 17 sano, meydkeeda la helay 1981. Gry Stirvik, 23 sano, meydkeeda la helay 1985. Quick ayaa loo xukumay 2000, laakiin waa laga siidaayey sannadkii 2012.
Marinus iyo Janni Stegehuis waxay la dilay 1984. Quick ayaa loo xukumay 1996, laakiin waa laga siidaayey sannadkii 2013.
Charles Zelmanovits, 15 sano, waxaa la waayey 1976, meydkiisa la helay 1996. Quick ayaa loo xukumay 1994, waxaase laga siidaayey 31 Luulyo 2013.